[Monday, September 11th, 17] :: Qarax ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (RH) Inta la xaqaiijiyey hal qof ayaa ku dhintay 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii baabuur lagu soo rakibay wax yaabaha uu ku qarxay bannaanka maqaayad ku taalla agagaarka hotelka Wehliye ee Makkah Al-Mukaramah ee magaalada Muqdisho.
Sida saraakiisha caafimadka laga soo xigtay, dadka dhaawacmay ayaa u badnaa dad shacab ah oo wadadda goynayey xilligaas iyo kuwa fadhiyey goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qaraxa ayaa dhacay abaare 4-tii galabnimo iyo dhowr iyo sodon daqiiqo.
Ma jirto cid illaa hadda sheegatay qaraxa, balse waxaa sheegis mudan in wadadda Makkah Al-Mukaramah in ay ku soo badaneeyn waayihii dambe qaraxyada loo adeegsado baabuurta la dhigo hareeraha wadadda, xilli laga mamnuucay baabuurta in la dhigto wadaddaas.
Dhinaca kale, ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada Beledxaawo ee gobalka Gedo, sidoo kale in ka badan 40 qof ayaa ku dhaawacmay.
Al-Shabaab ayaa muddo kooban magaalada la wareegay balse markii dambe waa ay isaga baxday, waxaana dib magaalada ugu soo laabtay ciidamada maamulka Jubbaland.
Xalaadda magaalada ayaa deggan.
posted on Monday, September 11th, 17